Nonozwela isimiso sezinzwa futhi imisebenzi yayo
Autonomic nesimiso sezinzwa, olubizwa nangokuthi autonomic, has amayunithi eziningana noma izingxenye. Omunye wabo - nonozwela isimiso sezinzwa. I division zibe izingxenye esekelwe izici tekusebentisa morphological. Enye zenyathi iyona parasympathetic isimiso sezinzwa.
Emphilweni we ophilayo umzimba isimiso sezinzwa wenza anhlobonhlobo izici eyenza kube a ukubaluleka eliphezulu kakhulu. Ngu uqobo, uhlelo eziyinkimbinkimbi futhi has neminye iminyango eminingana futhi zenyathi, ngamunye okuyinto ethatha kwezinye imisebenzi. ezithakazelisayo kakhulu ukuthi okokuqala into enjalo njengoba nozwela isimiso sezinzwa uvele 1732. Ekuqaleni, leli gama lase lisetshenziselwa ukuchaza yonke autonomic nesimiso sezinzwa. Kodwa njengoba ulwazi zanqwabelana ososayensi, baqaphela ukuthi lapha amanga ungqimba olubanzi kakhulu, ngakho-ke lokhu umqondo baqala ukubiza zenyathi eyodwa kuphela.
Uma sicabanga amagugu ethile, kutholakala ukuthi nonozwela isimiso sezinzwa imisebenzi ngempela ezithakazelisayo ukuze umzimba - ke unesibopho ukusetshenziswa kwezinsiza, kanye ukugqugquzela amabutho ezimweni eziphuthumayo. Uma kunesidingo, ohlelweni onozwela kwandisa bachitha amandla, ngakho umzimba akwazi ukuqhubeka ngendlela evamile futhi senze umsebenzi waso. Lapho sikhuluma amathuba ezifihliwe nezisetshenziswa, sisho lokho. On indlela uhlelo uyoyisingatha, kuzoya nesimo umzimba.
Nokho, konke lokhu kuyinto ukucindezeleka enamandla umzimba hushazela kule modi, ayikwazi ukusebenza. Nangu eza ohlelweni parasympathetic, okuyinto has umsebenzi izisetshenziswa kanye ekuqongeleleni wawo wokubuyisela, ukuze kamuva le ndoda yakwazi ukwenza imisebenzi efanayo, kodwa izici zalo kokungavinjelwe. I nozwela futhi parasympathetic isimiso sezinzwa ukuvumela ukusebenza evamile umzimba womuntu ezimweni ezahlukene. Basebenza bangahlukani njalo ngokuphelele.
Nonozwela isimiso sezinzwa kuyinto ngempela eziyinkimbinkimbi futhi isakhiwo branched. Emaphakathi ingxenye itholakala emgogodleni azungeze uxhuma ahlukahlukene ganglia nezokugcina emzimbeni. Empeleni nozwela kwalapho axhunyiwe ezicutshini eziningi innervated ku plexus.
Kumiswa uhlelo by azungeze ezihlukahlukene sezinzwa izinzwa afferent lapho ethize icubungula imfucuza. Basuke isuswe emgogodleni kuvuna ikakhulukazi ISIZINDA prespinal futhi paravertebral.
Umsebenzi kohlelo nozwela
Njengoba kushiwo ngaphambili, ohlelweni onozwela ngokugcwele isebenze ezimweni ezicindezelayo. Kwezinye imithombo ibizwa ngokuthi esisheshayo nozwela isimiso sezinzwa, ngoba kufanele anike tiphakamiso ezinye umzimba ukuze isimo, kwakhiwa kusukela ngaphandle.
Kuleli qophelo embhalweni indlala adrenal iqala ukukhiqiza adrenalin, okuyinto kungukuqiniseka main elivumela abantu ukuba ngcono futhi Indlela abasabela ngayo ezimweni ezicindezelayo ngokushesha. Nokho, nesimo esifanayo kungenzeka ngesikhathi umsebenzi, lapho ngenxa ukukhululwa kwe-adrenaline umuntu uqala ukubhekana nakho kangcono. adrenalin uketshezi sithuthukisa isenzo kohlelo nozwela, okuyinto uqala "ukunikela" izinsiza anda energy ukusetshenziswa ngoba kuphela adrenaline kuvusa izitho ezihlukahlukene futhi izinzwa, kodwa empeleni ngumnikazi umtfombolusito.
Effect emzimbeni siphakeme ngokwanele, ngoba ngaleso sikhathi umuntu ahlangabezana ukukhathala, ubuthakathaka, nokunye, kuye ngokuthi usunesikhathi esingakanani benza umphumela adrenaline futhi ohlelweni onozwela esingakanani ukuba basebenzise izinsiza ukusekela umsebenzi umzimba ezingeni elifanayo.
Abesifazane Omkhulu ososayensi kanye abakutholile. isithombe
Ukuxhumana izitsha. Angenza izimanga
Iyini ingcindezi gas, liquid okuqinile
Yokusungula management system in the ibhizinisi
"Itiye Spoon" (Petersburg): incazelo, imenyu, indawo
Footballer Oleg Luzhny: Biography
Dessert esimnandi - apula Sambuc
Isikhumbuzo seDerzhavin eKazan: umlando onzima wokusungula
Black uwoyela ikhumini: ukubuyekezwa kanye ayelapha